Takelaka fanadiovana OPS effustacent | Fluid Windshield tsara indrindra
NO.208, Dongxi Industral Park, Wucheng, Jinhua, Zhejiang, Sina.
Kodiaran-tariby tsara indrindra
Fanadiovana fiara ao anaty fiara
Fandroana ny Shampoo Formula
Tablets fanafody fanindroany
Ny famafazana manitra fofona
Gel San Hander
Fofona tanana Sanitizer
Mpikambana mipetraka eo amboniny
Home / Products / Tablets fanafody fanindroany
Toeram-pisiana matevina tsara indrindra
Ny tabilao Windshield Washer mifantoka amin'ny fluide wiper, dia azo ovaina ho tsiranoka fanala varatra mandritra ny vanim-potoana rehetra (tsy ampiasaina ao ambanin'ny 32 ℉), fa manana fahaizana manadio mahery.
takelaka iray ao anaty rano 4L dia hitovy amin'ny tsiranoka mpanasa 4L. Ny fampiasana anzima biolojika hamongorana ny hodi-mando hanatratrarana voka-bary madio, ho tsara fihavanana amin'ny tontolo iainana. tsy misy poizina,
tsy misy fôkôla simika. Ny takelaka fanadiovana mahomby dia mpiara-miasa manadio anao tsara!
♣ Mihamitombo haingana, mora ny manala vovoka amin'ny giro.
♣ Takelaka 1 + rano 4L = Rivo-mandro ny rivotra mahery vaika 4L!
♣ Fahombiazana bebe kokoa noho ny mpiasam-panjakana mpanadio.
♣ manga, habe kely, sarobidy azo itondrana entana ary mora entina.
♣ Vokatry ny ronono bt, fonosana loko, ala sarimihetsika, sns.
Nahoana no zava-dehibe ny mifidy tsiranoka mamatsy voro-mihetsika azo itokisana?
Ny fampiasana lavabe any amin'ny tontolo iainana ivelan'ny trano, ny rivodoza fiara misy anao dia efa mihodina ary miaraka amin'ny ratra maro.
Araka ny antontan'isan'ny sampan-draharaham-pahefana, ao amin'ny lozam-pifamoivoizana, Ny 70% amin'izy ireo dia vokatry ny fahitana mahatsikaiky ny rivodoza!
Mora ny mihantitra amin'ny rivotra mofomamy avy amin'ny rivotra amin'ny alàlan'ny fipoahan'ny masoandro sy ny orana isan'andro raha tsy voaro na simba ny faritra,
Mora kokoa ny manatsotra ny fiainam-pandehanana an-tserasera ary mety ho sarotra ny diovina!
Raha ny marina, Ataovy mihodina ny rivotra misy anao dia zavatra mora!
Korontana vokatry ny orana asidra • Ny fahasimban'ny hafanana marobe • Manokana ny fasika sy ny fasika miparitaka • Fialan-tsasatra fiara
Ireo toe-piainana ireo dia niteraka fahasimbana lehibe teo amin'ny rivotra rehetra.
Ny voka-dratsin'ny rivotra amin'ny rivotra amin'ny rivotra dia mety hiteraka oram-batravatra na ranonorana amin'ny rivotra
izay tsy afaka ny ho voaloto tanteraka, ka miteraka fahitana tsy voajanahary.
Manana fanao ratsy tahaka izany ve ianao?
Aza manasa ny fiara ny ranomandry rehetra mandritra ny vanim-potoana fiaramanidina, hampiasana vovony fanasan-damba, fanasana vovoka, sns ...?
Na manasa rano madio amin'ny rano madio?
Inona no loza aterak'izany?
Apetaho ny fantson-jiro, Soraty ny valan-tsokajy, Manafenao ny rivotra amin'ny rivotra, Fenoy ny hoditr'ilay rivotra.
OPS Tendrombohitra fanaovan-tsolosaina OPS, ataovy tsara ny fiara mandeha amin'ny rivodoza.
Tombontsoa lehibe fito sy ny endrik'ilay takelaka fanilo vozongo mifantoka.
Mora sy mahomby amin'ny fanesorana sarimihetsika solika:
♦ Arotsaho haingana ny sarimihetsika solika ny rivotra tsy misy rano, ary afaka manitatra ny fiainan'ny fanala amin'ny rivotra.
Fiarovana amin'ny fisintahan'ny fiara:
• Ny fampiasana an'io vokatra io mandritra ny fotoana voafetra dia afaka manalefaka ny fantson-damba amin'ny rivotra ny rivotra ary ny manome fiainana lava kokoa.
Fiarovana sy fahamendrehana:
• Tsy misy ratra na korontana eo amin'ny girany, tsy misy korontana.
♦ Takelaka mpanasa 1PC = tsiranoka jirona 4L, avelao ny habaka ao anaty fiara.
Ilaina amin'ny andron'ny orana:
• Tsy azo esorina ny sarimihetsika solika, maninona raha ampidiro ity vokatra ity mba hampiato ny olana ateraky ny solika horonan-tsary
Hafatra avo lenta, fahitana mazava:
• Madio sy mamakivaky lalindalina kokoa ny fiaramanidina, mamela azy hitondra fiara tsara kokoa.
Ny fampiasana samihafa samihafa:
• Na inona na inona ampiasain'ny mpanjifa amin'ny fotoana rehetra, Fiaramanidina fanodinana ranomandry ho an'ny ririnina Misy vokany tsara koa izany!
Fa io dia hampiditra zava-pisotro misy alikaola amin'ny ranon-tsofina famandrihana rivotra
Ahoana ny fampiasana takelaka fiara vita amin'ny rivotra?
1. Sokafy ny saron'ny fiara ary ento amin'ny rano madio izy
2. Raiso ny takelaka hapetraka ary ataovy ao anaty kitapo
3. Avereno ny fitaovana fanadiovana amin'ny fiara ao anaty fiara ary vita ny fanadiovana.
Hitanao, Toeram-pisakafoanana an-dronono ho an'ny homemade Mora ve sa miasa? Ny valiny dia asa tsotra!
Mitady ny mpamatsy takelaka fanala varatra ve azo itokisana? Mifandraisa aminay eto raha mila fanazavana fanampiny!
Tablets fanafody fanindronana fanafody
Tablets fanafody fanindronana, Lamina mpanadio tsara indrindra
Product Spec. 1PC na pcs hafa packed
Bika Aman 'endrika Tablet Concentrated
Period Guarantee 5 Taona
Daty nanomezana Around Two Weeks.
Fampahalalana misimisy kokoa, Mifandraisa aminay
Azafady mba porofoy fa olona ianao amin'ny fisafidianana ny House.
NO.208, Dongxi Industrial Park, Wucheng, Jinhua, Zhejiang, Sina.
Mahavariana mahatalanjona, entana fanadiovana fiaramanidina, vokatra fanasan-damba fiara, fiara manolotra vokatra vokatra. Takelaka maromaro amin'ny kitapo maromaro ampiasaina ao an-trano na fiara.
NO.208, Park Dongxi Industral, Wucheng, Jinhua, Sina.
Copyright © 2017 Zhejiang OPS Fiarovana ny tontolo iainana momba ny tontolo iainana, Ltd. All Rights Reserved